भारत भ्रमणमा राजेश हमाल ‘शो पिस’ मात्र – mero sathi tv
भारत भ्रमणमा राजेश हमाल ‘शो पिस’ मात्र
On २७ चैत्र २०७४, मंगलवार ११:०७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा पहिलोपटक कलाकारको सहभागिता गराइँदा सिंगो फिल्म इन्डष्ट्रीले सम्मानित महसुस गर्‍यो । कलाकारको तर्फबाट महानायक राजेश हमाल र दिनेश डीसीले यो अवसर पाएका थिए ।
तर, यी दुईको भारत भ्रमणको कुनै प्रयोजन भने देखिएन । भारतमा उनीहरुले कुनै अलग्गै विजनेस पाएनन् । फलत उनीहरु ‘शो पिस’ मात्र बन्न पुगे । त्यसो त प्रधानमन्त्रीको टोलीमा रहेका दुई-चार जना महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुबाहेक अरु सबै डफ्फा बेरोजगार नै थिए ।
उच्चस्तरीय भ्रमणमा कलाकारलाई स्थान दिइनु प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ र सुखद अभ्यास हो । तर, उनीहरुको विज्ञता आवश्यक पर्ने कुनै बेग्लै कार्यक्रम नहुँदा यो अभ्यास औचित्यपूर्ण भने बन्न सकेन ।
भ्रमण सोचेभन्दा राम्रो: दिनेश डिसी
भारत भ्रमणबाट फर्किएका दिनेश डिसीले भ्रमण सोचेभन्दा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अनलाइनखबरसँगको छोटो फोन सम्पर्कमा आएका उनले भने, ‘भ्रमण अत्यन्त फलदायी रह्यो ।’
उनले भारतीय कलाकारहरुसँग अन्तरक्रिया पनि भएको बताए । कोको कलाकारसँग भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यसबारे बिस्तारमा बसेर कुरा गरौंला ।’
राजदूत बन्ने राजेशको इच्छा !
भारतमै छँदा एक अनलाइनलाई अन्तरवार्ता दिँदै राजेश हमालले प्रधानमन्त्री ओलीको खुलेर तारिफ गरे । साथसाथै उनले अवसर आएमा भारतका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको समेत जनाउ दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीको नयाँ सोच र विचारले मलाई प्रभावित बनाएको छ, मैले उहाँसँग जे अपेक्षा राखेको थिएँ, त्यो भ्रमणमा प्रतिबिम्बित भएको छ,’ अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोगी, प्रशंसक र समर्थक भएको उनले बताएका छन् ।
दिल्लीमा त तपाईंलाई भारतको राजदूत बनाउन लागियो भन्ने चर्चा चल्यो नी भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘मेरो व्यक्तिगत इच्छा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, पिताजीको लिगेसी पनि आफ्नो ठाउँमा छ । तर मलाई राजदूत बन्न कुनै झिनो प्रस्ताव पनि आएको छैन । मेरो भित्री इच्छा सोध्नुहुन्छ भने त्यो पाटो अंगाल्नै मन छैन चाहिँ भन्दिनँ । प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष, हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो हुँ । केही कुटनीति स्वभाविक रुपमा बुझेको छु, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार कुटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु ।’
राजदूत बन्ने प्रस्ताव आइहाल्यो भने के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘हुन्न भन्न सक्दिनँ ।’
आखिर के कुराले रोक्यो रणवीर र दीपिकाको बिहे ? जान्नुहोस् ।